Wiilka George Floyd “ma joojin karo daawashada muuqaalka Geeridii Aabahay” | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Fiidiyowga gacanta lagu duubay ee geerida George Floyd, sarkaalka Derek Chauvin, wuxuu kusii haayay jilib qoorta dhabarkiisa ilaa sideed daqiiqo ilaa uu Mr. Floyd joojiyo hadalka ama dhaqaaqa. Geeridii lama filaanka ahayd ee George Floyd – oo maanta 47 jir noqon lahaa – waxay ahayd dhacdadii ku salaysaneed jinsiyad-naceylka iyo naxariisdarrada booliiska Mareykanka.
Wiilka George Floyd, ayaa sheegay inuusan joojin karin daawashada muuqaalka daqiiqadihii ugu dambeeyey aabihiis oo nool. Quincy Floyd ayaa madaxiisa hoos u fooraariyey oo wejigiisa daboolay markii uu maqlay oohinta aabbahiis ee soo noqnoqda ee ah “Ma neefsan karo”.
Wiilka ugu weyn ee Mr Floyd ayaa u sheegay Sky News: “Ma joojin karo daawashada fiidiyowga. Waxaan daawadaa fiidowga ku dhowaad in badan, ma’ahan maalin kasta, laakiin marwalba iyo kadib waxaan ka fikiraa oo keliya dhacdada aabbo”
Isagoo intaaS ku daray: “Weli waxaan ku riyoodaa aaska. Ku arkey naxashkaas waxay la mid ahayd inaan naftayda fiiriyo oo aan naftayda ku arko naxashka.”
Wiilka George Floyd waxaa ku soo istaagtay ilin marka uu fiirinaayey sawirka aabbihiis. Wuxuu intaas ku daray: “Waxay ahayd wax burbursan maxaa yeelay waxay u ekeyd inuu weli neefsanayo markii uu halkaas jiifay naxashkaas. Mar kasta oo aan fiiriyo isaga ayaan arkaa waxayna i siisaa naxariis ‘qabow.”
“Markii aan joogay aaska waxaan weydiiyay Rev Al Sharpton haddii ay caadi tahay inaan dhunkado, sidaas darteed waan dhunkaday si aan ula socodsiiyo inay wax walba haggaagi doonaan”
Sawirka waa Quincy Floyd iyo Rev Al Sharpton – aaskii aabihiis
Way adag tahay in nabad la helo, ayuu yiri, maadaama uusan iloobi karin xilligii loo sheegay geerida aabihiis: “Waxaa la iga soo wacay taleefanka oo leh ‘Aabahaa waa dhintay’. ” Qof ayaa iisoo sheegay inaan galo YouTube-ka oo aan fiiriyo muuqaalka markii aan sameeyayna waan rumaysan kari waayey inuu isagu yahay.
Waxaan gabadheyda kala hadlay awoowgeed, wax walbana uma sheegin, laakiin way ogtahay inuusan halkan sii joogin. “Waan jeclahay sida ay dadku ugu mudaharaadayeen sababtoo ah uma maleynaynin in ay cidna danaynaynin inuu sidaas ku dhinto.” ayuu yirri
“Waxaan haystaa waqti adag oo aan ku kalsoonaado wax booliis ah hada. Ma dhahayo dhammaan booliska waa boolis xun, laakiin dhamaan boolisyadu ma ahan boolis wanaagsan.” ayuu yiri Quincy Floyd. “Markii aan arkay wixii ku dhacay aabbahay waxay iga dhigtay inaanan aaminin wax boolis ah.” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Mudaharaadyada waxay bilaabmeen kadib markii Floyd oo ahaa nin Maraykanka madow ah oo aan hubaysnayn 25 Maay uu u dhintay jilibta uu luqunta kaga qabtay isaga oo dhulka yaal askari caddaan ah oo ka tirsan booliska Minneapolis oo la yiraahdo Derek Chauvin, oo muddo qiyaastii sagaal daqiiqo ah luqunta kaga taagnaa.
George Floyd ma ahan qofkii ugu horreeyay ee Afrikaan Mareykan ah ee ku dhinta gacanta booliska, laakiin dhimashadiisa ayaa badashay Mareykanka.
“Aabbahay wuxuu had iyo jeer ii sheegi jiray inuu adduunka beddelayo. Marnaba ma aanan ogeyn sida uu taa u sameynayo, laakiin hadda waan ogahay,” ayay tiri Quincy Floyd.
Tababarayaasha booliska iyo kuwa ku xeel dheer dambiyada ayaa sheegay in, dhacdadaan u muuqato inay tahay mid marar badan horseeday dhimashooyin badan. Mylan Masson, oo ah sarkaal hore oo booliis ah oo waday tabbabaro booliiska Minneapolis muddo 15 sano ah ilaa iyo 2016 wuxuu yiri “Waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano qoorta sida ugu macquulsan.”
Cunsuriyada Mareykanka waxay jirtay ilaa xilligii gumeysiga, waxayna ku lug leedahay sharciyada, dhaqamada, iyo talaabooyinka lagu takoorayo kooxaha kala duwan ama si xun ugu saameynaya siyaabo kale, iyadoo lagu saleynayo isirkooda ama jinsiyadooda.
Cunsuriyaddu waa qaab caddaadis nidaamsan oo ay soo saaraan xubno ka tirsan dowladda si loo dhibaateeyo dadyowga kale ee ka duwan xagga midabka iyo timaha.
Dunidaan casriga ah, cunsuriyada hay’adaha waxaa lagu qeexaa cunsuriyad ay geystaan hay’adaha bulshada iyo siyaasada, sida iskuulada, maxkamadaha, ama militariga. Si ka duwan cunsuriyada ay ku kaceen shakhsiyaadka, cunsuriyada hay’adaha, oo sidoo kale loo yaqaano cunsuriyada nidaamsan, waxay awood u leedahay inay si xun u saameyso tirada badan ee dadka ka tirsan koox isir. Cunsuriyada hay’adeed waxaa lagu arki karaa meelaha hantida iyo dakhliga, caddaalada dambiyada, shaqada, daryeelka caafimaadka, guryaha, waxbarashada, iyo siyaasada, iyo kuwa kale.
Tags: Bisha Taariikhda Madow: Wiilka George Floyd 'ma joojin karo daawashada' - Muuqaalka Geerida Aabihiis
Next post Kufsiga Soo Badanaayo Ma Loo Aaneyn Karaa Daawashada Filimmada Xun Xun ee Galmada?
Previous post 14 Oktoobar Waxay Ummada Soomaaliyeed u Ahayd Maalin Mugdi Leh